Niakatra ny vidin'ny serivisy fahitalavitra YouTube rehefa avy nanampy fantsona vaovao | Avy amin'ny mac aho
Ny tariby dia zavatra taloha. Farafaharatsiny izany no noheverin'i Google rehefa nanomboka namorona serivisy fahitalavitra amin'ny Internet, izay ahafahantsika manana ireo fantsona ara-panatanjahantena ankafizinay, andian-tsarimihetsika, sarimihetsika, vaovao ... eo am-pelatanan'ny totozy amin'ny alàlan'ny fampiharana TV YouTube, serivisy iray izay efa herinandro vitsivitsy no efa natokana ho fampiharana ho an'ny Apple TV.
Na dia mbola tsy misy amin'ny faritra amerikana iray manontolo aza izany dia misy ny tsaho milaza fa afaka Google manitatra ity serivisy ity amin'ny firenena hafa, indrindra any Eropa, hahazoana fifanarahana amin'ireo fantsom-bola lehibe indrindra ary manolotra izany amin'ny alàlan'ny sarany isam-bolana, izay mitovy amin'ny atolotra any Etazonia ankehitriny.
Fa amin'izao fotoana izao, ity serivisy ity any amin'ny faritany amerikana ihany no misy azy Ary rehefa mandeha ny volana dia manakatona fifanarahana vaovao ny YouTube hampiditra fantsona vaovao ho an'ireo izay efa natolony $ 35. Ny sasany amin'ireo fantsona farany izay efa misy amin'ny alàlan'ny fahitalavitra YouTube dia ny CNN, Adult Swin, TNT, Turner Classic Film ary Cartoon Network, ny fantsona sasany izay ahafahantsika mankafy azy ireo miaraka dia hanery antsika handoa $ 5 bebe kokoa.
Amin'ireo 5 dolara fanampiny ireo dia mila manampy ny 40 dolara isam-bolana ny vidin'ny serivisy, fiakarana 5 dolara raha ny vidiny izay hotohizan'ny mpanjifa hatramin'ny 13 martsa ho avy izao, daty hanatanterahana ny fampakarana amin'ny fomba ofisialy. Amin'ny volana ho avy, YouTube TV dia hanolotra lalao NBA sy MLB koa, amin'ny vidiny ampiana amin'ny saram-pifandraisana ankehitriny.
YouTube TV dia nibata ny tsena mba hifaninana amin'i Hulu sy Sony PlayStation Vue, serivisy izay misy vidiny mitovy amin'izany na amin'ny sarany na amin'ny fonosana fantsona fanampiny amin'ny serivisy Google. Saingy tsy izy ireo ihany no safidy, satria afaka manofa Sling TV ihany koa isika, serivisy manome antsika fidirana amin'ny fantsona marobe amin'ny $ 20 isam-bolana ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Niakatra ny vidin'ny serivisy YouTube TV taorian'ny nanampiany fantsom-baovao